Topnepalnews.com | सुन्दरनगर गोली काण्ड:यसरी भयो,प्रहरी निरिक्षक माथी हातपात (विस्तृतमा)
Posted on: June 02, 2016 | views: 1132
पप्पु गुरुङ्ग, २० जेठ, दोधारा चाँदनी/कञ्चनपुर ।
मंगलवार अपरान्ह करिब ३ बजे ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरिक्षक बिरेन्द्र बिर विश्वकर्मा र प्रहरी जवान गग्न ढुङ्गाल दोधारा चाँदनीका नगरपालिका वडा नं. ८, सुन्दरनगरमा गएका थिए । उनिहरु सामान्य सिमा क्षेत्र तथा गा“उको अवस्था बुझ्न गए । सुन्दरनगर दोधारा चा“दनीको जगबुडा नदीको पारीको गाउ हो । जहा जगबुडा नदीमा झोलुङ्गे पुलको निमार्ण कार्य हुदै छ् । सिमा क्षेत्र तथा गा“उमा गतिबिधी बुझ्दै गर्दा प्रहरी निरिक्षकलाई २०६६ साल माघ १७ देखि मानव बेचबिखनमा फरार अभियुक्तको बारे स्थानियबाट जनाकारी पाए । अभियुक्त बिर बहादुर सुनार घरमा बसिरहेको थिए । अभियुक्त सुनार १ महिना जति दोधारा चा“दनीको आफ्नै घर फर्केको थिए । उनि बेचबिखन मुद्धामा फरार भएर भारतमा बस्दै आएका बताईएको छ् । अभियुक्त बिर बहादुर सुनारको घर पुगेर निरिक्षकले जानकारी लिए पश्चात उनलाई प्रहरी कार्यालयमा हिड्न भने ।
अभियुक्तलाई प्रमाणित गर्न उनको नेपाली नागरिकता समेत प्रहरीले हे¥यो । उनि फरार अभियुक्त हो भन्ने कुरा प्रहरीले ठहर ग¥यो । तत्पश्चात प्रहरीे बिभिन्न बाहना बनाएर उनलाई प्रहरी कार्यालय लग्न कुरा मिलायो । सुन्दरनगर देखि ईलाका प्रहरी कार्यालय ८ किलोमिटर जति टाढा छ् । प्रहरीको कुरा सुन्दै गर्दा अभियुक्त सुनार प्रहरीको कुरै नसुनि भाग्न थाले । उनि भागेर भारत÷नेपाल सिमाको १० गजा सम्म पुगे । एक जना प्रहरी निरिक्षक र एक जवान सुनारको पिछा गर्दै गरे । अन्तः अभियुक्त बिर बहादुर सुनारलाई रोक्न प्रहरीले एक राउण्ड आकाशमा हावाईफायर गर्नु प¥यो । एक राउण्ड हावाई फायर पछि अभियुक्त बिर सुनारले आफुलाई प्रहरी समक्ष समर्णपण गरे । बल्ल प्रहरीले समात्यो । करिब एक हजार मिटरको दौडाभागीमा प्रहरीले अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । पक्राउ परेको सुनारलाई ल्याउदै गर्दा अभियुक्त सुनारका अनफ्तले एक समुह बनाएर प्रहरीलाई आक्रमण ग¥यो ।
प्रहरी निरिक्षक तथा प्रहरी जवान माथी हातपात गर्दै अभियुक्त भनिएका सुनारलाई भगाएर सिमा पार गरायो । उक्त छिनाझम्टीमा प्रहरी कुटिए । प्रहरीको रिवाल्भर खोसियो । खिचातानीमा प्रहरी भएको बारे उनिहरुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । “प्रहरी हुन भन्ने कुरा हामीलाई थाहै भएन् ।” स्थानिय पार्वती चदारोले भनिन् । तर प्रहरीे उनिहरुलाई प्रहरी भएको थाहा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रहरीले लखेट्यो भन्दै एक समुह प्रहरी माथी जाईलागेको ्प्रहरी जवान गग्न ढुङ्गाले बताएका छन् । प्रहरीलाई स्थानियहरुले बचाउदै उनिहरुलाई सुरक्षित स्थान सम्म ल्याउन सफल भए । प्रहरी निरिक्षक तथा जवान कार्यालय फर्केर थप प्रहरी लिएर सुन्दरनगर गयो । ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चा“दनी देखि सुन्दरनगर पुग्न करिब ३० मिनेट जगबुडा नदी पार गर्नु पर्छ । थप बल सहित प्रहरी पुग्दा सम्म अभियुक्त भनिएका र उनलाई भगाउनेहरु फरार भएका थिए ।
प्रहरीले बिक्रम सुनार, काला सुनार गरि १० जनाको नाउ संकलन गरि अभियुक्तलाई भगाउने ब्यक्तीको सुचीमा राखी उनिहरुको खोजी कार्य जारी राखेको छ् । २०६६ साल माघ १७ गते मानव बेचविखन बिरुद्ध दोधाराका एक महिलाले बिर बहादुर सुनार लगाएत भारतिय नागरिक राजु रावल र गोपाल तिवारी बिरुद्ध अदातमा मुद्धा दायर गरे लगत्तै सुनार फरार रहेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पटक पटक गएपनि सुनार भारत गएको कारण उनाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन् । स्थानिय पार्वती चदारो अनुसार गा“उमा बेचबिखनको मुद्धा छिनोफानो गरिसकेको भएको बताएका छन् । उक्त छिनोफानोमा तत्काीन माओबादी सुरज सुनार लगाएत टोलीलाई रु. २१ हजार भारतिय रुपियाँ दिएर मुद्धा गाँउमा साम्य बनाएको बताईएको छ् । तर उक्त मुद्धा अदालतमा रहेको बारे कसैे चाँसो नदेखाएको कारण यो समस्या आएको चदारोको भनाई रहेको छ् ।